Ny Galaxy Fold dia amidy any Shina taorian'ny dimy minitra amidy | Androidsis
Ny Galaxy Fold dia amidy ao Shina ao anatin'ny dimy minitra monja
Eder Ferreño | | Finday, Samsung
Ny Galaxy Fold dia iray amin'ireo maodely be mpiresaka indrindra fararano ity. Efa herinandro maromaro izay ny telefaona aforeto voalohany an'ny Samsung dia natomboka tamin'ny fomba ofisialy tany Espana. Ny fandraisana an-telefaona an-telefaona an-tsena dia miabo, miaraka amin'ny varotra izay tsara, amin'ny tranga sasany aza mihoatra ny andrasana amin'ny marika aza.
Natomboka tany Chine koa ny telefaona, firenena iray izay very fanatrehana Samsung mazava tsara. Na eo aza ny fihenan'ny lazan'ny orinasa Koreana eto amin'ity firenena ity dia miteraka fahalianana ny Galaxy Fold. Raha ny marina, tamin'ny andro voalohany aza dia efa namidy.
Natomboka tany Sina ny finday, amina mpivarotra voafetra roa. Tena liana tamin'ity Galaxy Fold ity ireo mpanjifa, satria tao anatin'ny dimy minitra monja dia reraka ny tarika rehetra an'ny maodely io. Nanamafy izany i Samsung ao amin'ny mombamomba azy ao amin'ny Weibo.
Tsy mbola nisy angona nomena amin'ny isan'ny singa efa namidy. Ny zavatra mahazatra amin'ity karazana hetsika ity dia vitsy izy ireo, fa farafaharatsiny ho an'ny orinasa dia famantarana tsara, fa na dia amin'ny tsena toa an'i Shina aza, izay tsy dia misy ifandraisany loatra dia misy ny liana amin'ity fitaovana ity.
Na izany na tsy izany, zava-dehibe ihany koa ny fandefasana ny Galaxy Fold any Shina. Araka ny ny Huawei Mate X dia natomboka any Chine ihany koa, ka mifaninana amin'ity sehatry ny tsena ity. Ka ny fananana fanatrehana any Shina amin'ity finday ity no lakilen'ny tetikadiny.
Tsy maintsy ho hitantsika ny fivarotana an'ity Galaxy Fold ity amin'ny volana ho avy. Manana fikasana mazava ny orinasa koreana manitatra ny isan-karazany ny telefaona azo ahodina miaraka amin'ny telefaona vaovao, izay mivarotra tokony hiakatra be koa ho an'ny taona manaraka, farafaharatsiny, araka ny vinavinan'ireo novinavinainy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Ny Galaxy Fold dia amidy ao Shina ao anatin'ny dimy minitra monja
langosta dia hoy izy:
Salama, avy any Samung aho, nanamboatra singa 50 an'ny onja voalohany izahay, namidy daholo! Fahombiazana 100%! oh ary niverina 40 fotsiny ry zareo ... hatreto
Mamaly an'i hummer
Azo atao ny manana resadresaka mitohy miaraka amin'ny Google Assistant